Wararka Maanta: Talaado, Jun 11, 2019-Taliyihii qeybta Booliiska gobolka Hiiraan oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay dulleedka magaalada
Talaado, June, 11, 2019 (HOL)-Taliyihii qeybta Booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed ayaa ku geeriyooday iska horimaaad goor dhaw oo maanta ah ka dhacay dulleedka magaalada Beledweyne gaar ahaan deegaanka Kala-Beyr.
Sidoo kale dagaalka waxaa ku dhaawacmay taliye ku-xigeenka ciidamada Booliska Baladweyne iyo saraakiil kale,waxaana dagaalka uu ka socdaa Koon-toroolka deegaanka Kalabeyr.
Wararka ayaa intaa ku daraya in weli deegaanka Kalabeyr ee duleedka Baladweyne laga maqlayo rasaasta dagaalka u dhaxeeya ciidamada Booliska Hirshabeelle iyo kuwa daacad u ah guddoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Maalmihii ugu danbeeyayba waxaa magaalada ka jiray xiisad ka dhalatay xil ka qaadis lagu sameeyay Yuusuf Dabageed.
Laakiin Yuusuf Daba-geed ayaa iska diiday xil ka qaadista lagu sameeyay, isaga oo sheegay in uusan aqoosaneyn guud ahaanba jiritaanka maamul gobolleedka Hirshabeelle
Abdisalan Nor Dirie , Hiiraan Online